Latest TimeAyeYar News!
60. အမှုဖြစ်နေသော လယ်ယာမြေများအတွက် တောင်သူများမနစ်နာစေရေး တရားရုးံဆုးံဖြတ်ချက်မကျမီ စိုက်/ဘဏ်ချေးငွေထုတ်ပေးရန် တောင်းဆို	-TimeAyeYar
#ပြည်တွင်း	(03h ago)
ဖွင့်ရန်။ အမှုဖြစ်နေသော လယ်ယာမြေများအတွက် တောင်သူများမနစ်နာစေရေး တရားရုးံဆုးံဖြတ်ချက်မကျမီ စိုက်/ဘဏ်ချေးငွေထုတ်ပေးရန် တောင်းဆို
စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း အငြင်းပွားမှုများ၊တရားမလမ်းကြောင်းဖြင့် တရားရုးံရောက်နေသော လယ်ယာမြေများအတွက် အမှုအခင်း အပြီးပြတ်သေးမီ စိုက်စရိတ်ချေေးငွများကို တောင်သူများမနစ်နာစေရန် မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြုိးရေးဘဏ်မှ ထုတ်ချေးပေးသင့်ကြောင်း ၀န်းသိုမြို့ အမှတ်၁ မဲဆန္ဒနယ်မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်လင်းဦး ကပြောသည်။
သြဂုတ် ၂ ရက်ေန့ကပြုလုပ်သော ၁၅ကြိမ်မြောက်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ် ၄ရက်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင်အမွေဆက်ခံခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောလယ်ယာမြေအငြင်းပွားမှုများ၊တရားမကြောင်းအရတရားစွဲထားသော လယ်ယာမြေများ၊အမှုအခင်းမပြီးအပြတ်ဆုးံဖြတ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးခင်းအချိန်ထိဘဏ်ချေးငွေ ထုတ်ချေးပေးနိုင်ခြင်း ရှိ၊မရှိကို ဦးဇော်လင်းဦး ကမေးမြန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အမှုအခင်းနဲ့ဖြေရှင်းနေရတဲ့ အတောအတွင်းမှာ လက်ရှိတောင်သူကလည်းလယ်ယာမြေ ဆက်လုပ်နေတယ်၊ပုံစံ၇ လည်း ရပြီးဖြစ်တယ်၊ တရားမကြောင်းနဲ့ဆွဲတဲ့အမှုတွေဆို အမှုပြီးဖို့ နှစ်ချီကြာတာကြောင့် အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အချိန်အတွင်း စိုက်စရိတ်ကို တခြားနည်းနဲ့ချေးယူနေရတာ တောင်သူတွေ ပိုနစ်နာဆုးံရှုးံတယ် ဟု ၄င်းကပြောသည်။
ယခုနှစ်မှ စ၍ ဘဏ်ချေးငွေများထုတ်ပေးရာတွင် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ် (ပုံစံ-၇) မူရင်းကို ဘဏ် သို့ပေးအပ်နိုင်မှသာ စိုက်စရိတ်ချေးငွေများ ထုတ်ပေးသည့်စနစ်သို့ ပြောင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ၄င်းပုံစံ၇ နှင့်ပတ်သက်၍ မိသားစုတစ်ဦးကသော်လည်းကောင်း၊ပြင်ပ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကသော်လည်းကောင်း ကိစ္စတခုခုကြောင့်ချေးငွေထုတ်မချေးရန် ဘဏ်သို့ တရားဝင်ကန့်ကွက်ပါက ယာယီရပ်ဆိုင်းထားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
သက်ဆိုင်ရာတရားရုးံများက အဆုးံအဖြတ်မကျသေးခင် ဘယ်သူ့ကိုမှ ငွေထုတ်ချေးခြင်းမပြုပါဘူး၊ ထုတ်ချေးပြီးမှ အငြင်းပွားသူ တစ်ဦးကို အနိုင်ပေးလိုက်ရင် နိုင်ငံတော်ငွေသာ ဆုးံရှုးံသွားမှာပါ၊ ဟု စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးဦး ကပြောသည်။
ယင်းကြောင့် အငြင်းပွားမှုများနှင့် တရားရင်ဆိုင်နေရသော လယ်ယာမြေများကို အမှုမပြီးခင်ထိ ချေးငွေများ ထုတ်ချေးသွားရန် အစီအစဉ်မရှိကြောင်း ၀န်ကြီး ကလွှတ်တော်တွင်ဖြေကြားခဲ့သည်။
59. မုံရွာ-ရေဦးလမ်းတွင် လမ်းပေါက်များဖာရန် ဆုထူးပန်ကုမ္ပဏီအားနှစ်ကြိမ်တိုင် ညွန်ကြားသော်လည်း မလုပ်၍ လွှတ်တော်တွင်မေးခွန်းထုတ်	-TimeAyeYar
ဖွင့်ရန်။ မုံရွာ-ရေဦးလမ်းတွင် လမ်းပေါက်များဖာရန် ဆုထူးပန်ကုမ္ပဏီအားနှစ်ကြိမ်တိုင် ညွန်ကြားသော်လည်း မလုပ်၍ လွှတ်တော်တွင်မေးခွန်းထုတ်
မုံရွာ-ရေဦး ကားလမ်းတွင် လမ်းပေါက်များအား ဖာထေးရန် BOT စနစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နေသော ဆုထူးပန်ကုမ္ပဏီအား နှစ်ကြိမ်တိုင် ညွန်ကြားသော်လည်း လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိ၍ မုံရွာမြို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ကြည်က မေးခွန်းထုတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
မုံရွာမြို့တွင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်မှ အလုံမြို့သစ်နှင့် နမခ တပ်နယ်မြေအထိ လမ်းတွင်လမ်းပေါက်ဖာရန် ကုမ္ပဏီအား ညွန်ကြားရေးမှူး (မြို့ပြ)ရုး စစ်ကိုင်းတိုင်း လမ်းဦးစီးဌာန မှ အကြောင်းကြားစာ နှစ်ကြိမ်ထုတ်ညွန်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းကိစ္စအား သြဂုတ်၇ ရက်တွင်ပြုလုပ်သည့် ၁၅ကြိမ်မြောက်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်အမတ်က မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ ညွန်ကြားချက်ကိုလည်း တစ်နှစ်နီးပါးနေမှ အကြောင်းပြန်တယ်၊ စီမံချက်ရေးပြီး ဇူလိုင်လကုန်ထိ တစ်မိုင်အပြီးလုပ်မယ်လို့ပြောပေမယ့် အခုထိ လမ်းပေါ်မှာ ဘာမှလုပ်ငန်းစတင်ထားတာ မတွေ့ရဘူး၊ မိုးကြီးတော့မယ့်အချိန်ရောက်တော့ လမ်းတွေ ပိုပျက်တော့မှာ” ဟု ဒေါ်အောင်ကြည်က ပြောသည်။
မုံရွာ-ရေဦးလမ်းပိုင်း မိုင်တိုင် (၈၄/၀ မှ ၈၅/၁)အထိ အရှည် ၅မိုင်ကိုလည်းနှစ်အလိုက်လမ်းခင်းခြင်းများဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး မုံရွာမြို့နယ်အတွင်းဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်မှ Denko ဆီဆိုင်အထိ အရှည် တစ်မိုင်ကိုလည်း ယခုနှစ်အတွင်း AC ကတ္တရာကွန်ကရစ် ခင်းရန် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း လမ်းဦးစီးဌာနနှင့်သဘောတူထားကြောင်း သိရသည်။
“ ကျွန်တော်ထံကို နောက်ဆုးံ ရီပို့ အရ လမ်းသားချဲ့ခြင်း၊ချိန်ညှိခြင်း၊ သစ်ငုတ်တွေ ဖယ်ရှားခြင်းတွေကို ကုမ္ပဏီက လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်၊အဲဒီတစ်မိုင်ကို ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ မဖြစ်မနေ ခင်းဖို့ ညွန်ကြားပေးသွားမယ်” ဟု လျှပ်စစ်၊စက်မှုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးသန်းညွန့်ဝင်း ကပြောသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း တည်ဆောက်၊လည်ပတ်၊လွှဲပြောင်းစနစ် (BOT)ဖြင့် လုပ်ဆောင်နေသော ကုမ္ပဏီ ၅ ခုအား နေပြည်တော်မှ ခေါ်ယူညွန်ကြားမှုများလုပ်သည့်အပြင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လမ်းဦးစီးဌာနမှလည်း ၂ကြိမ်တိုင် တွေ့ဆုံလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
58. စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားများသိမ်းဆည်းရမိ	-TimeAyeYar
#ပြည်တွင်း	(04h ago)
ဇလွန် သြဂုတ် ၁၆
ဇလွန်မြို့မရဲစခန်းမှဒုရဲမှူးစိုးမြင့်နှင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သောပူးပေါင်းအဖွဲ့သည်သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ ညနေ
ရောင်ပတ်အဖြူ ရောင်ကော်ဘူးအတွင်းမှ WYစာတန်းပါ
ပန်းရောင်စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၁၃၃ ပြား၊WY စာ
တန်းပါအစိမ်းရောင်စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၃ ပြား၊
အိမ်သာမျက်နှာကျက်ပေါ်မှ Red Ruby ဆေးလိပ်ဘူးခွံ
သည်ဟုထင်ရသောခဲပြားပတ်ထားသည့် ၂ လက်မခန့်ရှိ
အဖြူ ရောင်ပိုက်အသေး ၁ ခု၊ ဒေါ်နုနုလွင်ဝတ်ဆင်ထားသည့် အင်္ကျီအတွင်းမှလက်ကိုင်ဖုန်း ၁ လုံးနှင့်ငွေစက္ကူ
57. ဇာတ်ပို့နေရာမပျောက်အောင် မနည်းရုန်းနေရသည်ဟု စိုးမိုးကြည် ပြောကြား	-TimeAyeYar
မနည်းရုန်းနေရသည်ဟု စိုးမိုးကြည် ပြောကြား
ယနေ့ခေတ်တွင် သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်တစ်ခု အဖြစ် လုပ်ကိုင်သူ များပြားလာခဲ့ပြီး ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမှုများလျှင် များသလောက် အနုပညာကြေးရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ရုပ်ရှင်ဈေးကွက်တွင် ရသလောက်နှင့် ရိုက်ကူးခြင်းများ ရှိနေကြောင်းနှင့် ယခင်ကပင် အနုပညာနှင့် ဝါသနာကိုအခြေခံပြီး လုပ်ကိုင်ခဲ့သူများအနေဖြင့် ဈေးကွက်အရ အဆင်မပြေမှုများ တွေ့ကြုံလာရ ကြောင်း သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဈေးကွက်ပျက်နေသည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဇာတ်ပို့တစ်ဦးအဖြစ် ၃၅ နှစ်တိုင်တိုင် ရပ်တည်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူ စိုးမိုးကြည်က \_'\_'အစ်မတို့အနေနဲ့တော့ ကိုယ် ကြိုက်တဲ့ဇာတ်ဆို မငြင်းပါဘူး၊ ကိုယ့်အတွက် လုပ်ကွက်များမယ်၊ ကျန်တယ်ဆို လုပ်ပါတယ်၊ လုပ်ကွက်နည်းတဲ့အခါမှာတော့ အစ်မတို့ကို လာငှားတဲ့သူတွေ၊ ပရို ဂျူဆာတွေက ဈေးကွက်အရ နည်းနည်း လက်တွန့်တာမျိုးလေးတွေ၊ မတတ်နိုင် တာမျိုးတွေတော့ ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် အစ်မတို့က ဒါပဲလုပ်တတ်တော့ သူတို့နဲ့ သေချာတိုင်ပင်ရတာပေါ့၊ အချို့က ဒီလူတော့ လိုချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ငွေကျတော့ မသုံးချင်ကြဘူး၊ သူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်လည်း မှန်ပါတယ်၊ အဲ့တော့ ဒီလူထက်ဈေး သက်သာသူကို သူတို့ ရှာကြတယ်၊ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ၁ဝ သိန်းလောက်ရတဲ့ သူကို ငါးသိန်းလောက်ဖမ်းဆစ်တော့ စိတ်ညစ်ရတယ်၊ အစ်မကတော့ သူ့ဘက်ကိုယ့် ဘက် အဆင်ပြေအောင်တော့ ကြည့်လုပ်နေရတာပါပဲ\_'\_'ဟု ဆိုသည်။
သရုပ်ဆောင် စိုးမိုးကြည်အနေဖြင့် အနုပညာလောကတွင် နာမည်တစ်ခု ဖြစ် တည်နိုင်ရန်အတွက် ကြိုးစားရုန်းကန်မှုများစွာရှိခဲ့ပြီး အနုပညာလောကထဲသို့ စနိုး ဝှိုက်ထုတ်လုပ်ရေးမှ ရိုက်ကူးသည့် တသသလွမ်း၊ တစ်အူထုံ့ဆင်း၊ မိုးထက်မြင့်သော စသည့် ဇာတ်ကားများဖြင့် ပရိသတ် လက်ခံအားပေးမှုရရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း ရိုက်ကူးရသည့် ဇာတ်လမ်းများတွင်လည်း ရသလောက်ကို ပရိသတ်ရင်ထဲရောက် အောင် လုပ်ဆောင်မည်ဟု သိရသည်။
\_'\_'အခုဆို အစ်မက ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဇာတ်ကားမှာလည်း အမေတစ် ယောက်နေရာကနေ ပါဝင်ထားတယ်၊ ဒါရိုက်တာ ဇမ္ဗူထွန်းသက်လွင်ရိုက်တဲ့ ကြီးမြတ်သောမာတာ ဇာတ်လမ်းတွဲလည်း ရိုက်နေပါတယ်၊ အဲဒီမှာတော့ အစ်မက မို့မို့မြင့်အောင်ရဲ့သမီးလေးကို ကောက်ယူမွေးစားတဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်\_'\_'ဟု လတ်တလော အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများကို ပြော သည်။
56. ဇာတိမြေဇာတ်ကားတွင် ဂျပန်စကားပြောဆိုမှု အခက်အခဲကို ဝတ်မှုံရွှေရည် ရှင်းပြ	-TimeAyeYar
ဖွင့်ရန်။ ဇာတိမြေဇာတ်ကားတွင် ဂျပန်စကားပြောဆိုမှု အခက်အခဲကို ဝတ်မှုံရွှေရည် ရှင်းပြ
ဂျပန်-မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအဖြစ် ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားသည့် ဇာတိမြေ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရုံမတင်ခင် လူမှုကွန်ရက်တွင် ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သောကြောင့် ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သူများ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်အပြင် အဆိုပါရုပ်ရှင်တွင် ပြင်ဆင်ချိန်နှစ်လသာ အချိန်ရခဲ့ပြီး တောင်ပေါ်သူရှမ်းမလေး နန်းဟပ်ခေးစံအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ဝတ်မှုံရွှေရည်၏ ဂျပန်စကားပြောဆိုမှုအပေါ်လည်း ပရိသတ်များ၏ ဝေဖန်မှုများရှိခဲ့သည်။
ဇာတိမြေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထပ်ဆင့် အကယ်ဒမီ ဝတ်မှုံရွှေရည်က \_'\_'ဒီကားထဲမှာ ကစ်က နန်းဟပ်ခေးစံဆိုတဲ့ ရှမ်းမလေး နေရာက သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်၊ ဂျပန်မှာမွေးပြီး ဂျပန်မှာပဲ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ မြန်မာ ပြည်က ကောင်မလေးပေါ့၊ ဒီဇာတ်ကားက အချစ်ကားလည်း မဟုတ်သလို သာမန် သမားရိုးကျဇာတ်လမ်းလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ နိုင်ငံရေးနဲ့လည်းဆက်စပ်တဲ့ နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေးကားပါ၊ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ကို ဖော်ကျူးတဲ့ကားလည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြောင့် နည်းနည်းတော့ တာဝန်ကြီးပါတယ်၊ ပြီးတော့လည်း ဒီကားရိုက်ခါနီး သုံးလ လောက်အလိုမှ ကစ်ကို လာပြီးပြောတာ၊ ဇာတ်ရုပ်က ကစ်က ဂျပန်မှာမွေးပြီး ဂျပန်မှာပဲကြီးပြင်းလာတဲ့ ကောင်မလေးဆိုတော့ ဂျပန်လိုပြောရတယ်၊ အဲဒီအတွက် ဂျပန်စကားလေ့ကျင့်ဖို့ နှစ်လလောက်ပဲ အချိန်ရလိုက်တယ်။ နောက်တစ်ခါ ဂျပန်မှာ သွားရိုက်ပြန်တော့လည်း ကိုယ့်နိုင်ငံမဟုတ်တော့ မတူတာတွေ၊ အလုပ်လုပ်ရတဲ့စနစ် မတူတာတွေရယ်ကြောင့် ပြဿနာတွေ၊ အခက်အခဲတွေ၊ ဖိအားတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေကိုမမှုဘဲ ကစ်တို့ ဒီဇာတိမြေတစ်ဖွဲ့လုံး ဂျပန်ရော မြန်မာပါ စုပေါင်းပြီးတော့ သေသေချာချာကို အားစိုက်ပြီး ဖန်တီးခဲ့ကြရတာပါ\_'\_'ဟု ပြောသည်။
ဂျပန်စကားပြောဆိုမှုအပေါ်တွင် ပရိသတ်များ၏ ဝေဖန်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ဝတ်မှုံရွှေရည်က \_'\_'စကားပြောတာကျတော့ ကစ်က ဂျပန်စကားကို မွေးကတည်းကပြောလာခဲ့တဲ့သူမှမဟုတ်တာ၊ ပြီးတော့ ဒီကားကို ရိုက်ခါနီး သုံးလလောက် အလိုမှာမှ ကစ်ကိုလာကမ်းလှမ်းတာ၊ ပြီးတော့လည်း အမှန်အတိုင်းပြောရရင် သူတို့ ပြင်ဆင်တာ၊ ညှိနှိုင်းတာနဲ့ဆိုရင် ရိုက်မယ့်အချိန်နဲ့ စကားပြောသင်တဲ့အချိန်က နှစ်လ လောက်ပဲ ရလိုက်တာ၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီ နှစ်လလောက်ကို နေ့တိုင်း အိမ်မှာသင်တယ်၊ ရှူတင်ချိန်ပြီးတာနဲ့ ညဘက်ဆို အိမ်မှာသင်တယ်၊ မနက်ဆို အိမ်မှာသင်တယ်၊ ပြီးရင် ဂျပန်ရောက်တာနဲ့လည်း ဂျပန်မှာ သင်ရတယ်ပေါ့နော်၊ တောက်လျှောက် ရှူတင်မှာ နားနေတဲ့အချိန်မှာတောင် ဂျပန်ကလူတွေနဲ့ စကားပြောနေရတယ်၊ ဒါတောင် သူတို့လို မပြောနိုင်ဘူး၊ မွေးကတည်းကပြောလာတဲ့သူတွေနဲ့ ကိုယ်က နှစ်လလောက် သင်ခဲ့ရတာနဲ့တော့ နှိုင်းယှဉ်လို့ဘယ်ရမလဲ၊ ကိုယ့်ဘက်ကတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပြီးတော့ ပြောခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒါလေးတော့ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်\_'\_'ဟု ဆိုသည်။
55. စစ်ပွဲပြီးဆုံးခြင်း အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနား ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ကျင်းပ	-TimeAyeYar
ဖွင့်ရန်။ စစ်ပွဲပြီးဆုံးခြင်း အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနား ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ကျင်းပ
တိုကျို သြဂုတ် ၁၅
ဂျပန်နိုင်ငံရှိပြည်သူများသည် ဒုတိယက္ဘာစစ်ပြီးဆုံးခြင်း အထိမ်းအမှတ်ပွဲ ကျင်းပလျက်ရှိသည်။ တိုကျိုမြို့ နိပွန်ဘူဒိုဂန်ခန်းမတွင် လူထောင်နှင့်ချီ၍ စုဝေးခဲ့ကြပြီး သြဂုတ် ၁၅ ရက်ရောက်တိုင်း အဆိုပါအခမ်းအနားကို ကျင်းပကြသည်။ ဂျပန်ဘုရင် အာကီဟီတိုနှင့်မိဖုရား မီချီကိုတို့သည် ယခုအခမ်းအနားကို နောက်ဆုံးအကြိမ် တက်ရောက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဂျပန်ဘုရင်သည် လာမည့်နှစ်ဧပြီလတွင်ထီးနန်းစွန့်မည်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၇၃ နှစ်က စစ်ပွဲအတွင်း လူပေါင်း သုံးသန်းကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီး ယင်းအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို လူပေါင်း ၆၅ဝဝ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ဂျပန်ဘုရင် အာကီဟီတိုက စစ်ပွဲပြီးနောက် ငြိမ်းချမ်းသောလပေါင်းများစွာကိုဖြတ်သန်းရင်း အတိတ်ကာလက အကြောင်းအရာများကို နောင်တရမိကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့စစ်ပွဲမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားရအောင် နက်နက်နဲနဲ မျှော်လင့်မိပါကြောင်း၊ ပြည်သူများနှင့်အတူ စစ်ပွဲအတွင်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့် လူတိုင်းအတွက် ဆုတောင်းပါ ကြောင်း၊ က္ဘာကြီးငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် ဆုတောင်းပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဂျပန်ဘုရင်သည် ¤င်းထီးနန်းလက်ခံရရှိသည့်အချိန်မှစ၍ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ရာ ယခုတစ်ကြိမ် မှာနောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
54. ညောင်တုန်းမြို့၌ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး ကွင်းရေ မြင့်တက်လာမှုကြောင့် စာသင်ကျောင်းများ ယာယီပိတ်ထား	-TimeAyeYar
ဖွင့်ရန်။ ညောင်တုန်းမြို့၌ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး
ညောင်တုန်း သြဂုတ် ၁၅
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မအူပင်ခရိုင် ညောင်တုန်းမြို့နယ်တွင် မိုးသည်းထန် စွာရွာသွန်းပြီး ကွင်းရေမြင့်တက်လာမှုကြောင့် သြဂုတ် ၁၅ ရက်တွင် ညောင်တုန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ စာသင်ကျောင်းများ ယာယီပိတ်ထားရကြောင်း သိရသည်။
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး ကွင်းရေမြင့်တက်လာမှုကြောင့် ညောင်တုန်း မြို့နယ်အတွင်း သြဂုတ် ၇ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိ စာသင်ကျောင်းပေါင်း ၁၂ ကျောင်း ကို ယာယီပိတ်ထားရသော်လည်း ကွင်းရေပြန်လည်ကျဆင်းမှုကြောင့် သြဂုတ် ၁၃ ရက်တွင် အမက(ပေါက်တော)နှင့် သြဂုတ် ၁၅ ရက်တွင် အမက(ပနော်ခနာ) ကျောင်းတို့ကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ကွင်းရေမြင့်တက်မှုကြောင့် ဆက်လက်ပိတ်ထားသည့် စာသင် ကျောင်းများမှာ အမက (ကညင်ကောက်)၊ အမက(ဂုံမင်းဆိပ်)၊ အလက(ခွဲ) (တပေ ကုလား)၊ မူလွန် (အလယ်ဆယ်)၊ အမက(ထရံကြီး)၊ အလက(ခွဲ)(ကုက္ကိုဝ)၊ အလက (ခွဲ) (ဖိုးခုံစု)၊ အမက(ရွာဟောင်း)၊ အမက (အောင် ဘောဂ)နှင့် အမက(ရွှေဟင်္သာ ကျွန်းအောက်စု) စာသင်ကျောင်း စုစုပေါင်း ၁ဝ ကျောင်း ကို ယာယီပိတ်ထားရကြောင်း မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးမှ သိရသည်။
53. မြောင်းမြတွင် WY စာတမ်းပါ ပန်းရောင်စိတ်ကြွဆေးပြားများ ဖမ်းဆီးရမိ	-TimeAyeYar
ဖွင့်ရန်။ မြောင်းမြတွင် WY စာတမ်းပါ ပန်းရောင်စိတ်ကြွဆေးပြားများ ဖမ်းဆီးရမိ
မြောင်းမြ သြဂုတ် ၁၆
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်းမြမြို့နယ်၊ မုဆိုးကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပတ္တာကုန်းကျေးရွာနေ အမျိုးသမီးတစ်ဦးထံမှ သြဂုတ် ၁၅ ရက်နေ့ ည (၇)နာရီခန့်က WY စာတမ်းပါ ပန်းရောင် စိတ်ကြွဆေးပြားများ ရှာဖွေသိမ်းဆည်းရမိကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့ မူးယစ်တပ်ဖွဲ့စု (၄၉) တပ်ကြပ်ကြီး ဦးစိုးဦးနှင့် ပုသိမ်ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မြောင်းမြခရိုင် မှုခင်းနှိမ်နှင်းရေးဌာနစိတ်မှ ရဲအုပ် ဦးအောင်ထွန်းဝင်း၊ နယ်ထိန်းခေါင်းဆောင် ရဲအုပ် ဦးအောင်ဆွေမြင့်နှင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ အသိသက်သေ များနှင့်အတူ ပတ္တာကုန်းကျေးရွာနေ မဇင်မာမြင့်၏ နေအိမ်သို့ သတင်းအရ ဝင်ရောက်ရှာဖွေရာ မဇင်မာမြင့်နှင့်အတူ မမြင့်သန္တာဝင်းအား အတူတွေ့ရှိပြီး မေးမြန်းရှာဖွေရာ နေအိမ် ဘုရားစင် အရှေ့ဘက် အိမ်အမိုး ဓနိမိုးကြားမှ သိမ်းဆည်းထားသော 88/1 စာတမ်းပါ နီညိုရောင် စိတ်ကြွဆေးပြား (၁၀) ပြား၊ WY စာတမ်းပါ လိမ္မော်ရောင် စိတ်ကြွဆေးပြား (၁၁၀)ပြား၊ မမြင့်သန္တာဝင်းအမည်ဖြင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသည့် မြန်မာ+တရုတ် နယ်စပ်သွားလာခွင့် ပတ်စပို့တစ်ခုတို့နှင့်အတူတွေ့ရှိပြီး စိတ်ကြွဆေးပြားများ သယ်ဆောင်သူ၊ ရောင်းချပေးသူမဇင်မာမြင့်နှင့် မမြင့်သန္တာဝင်းတို့ နှစ်ဦးအား မြောင်းမြရဲစခန်းက အမှုဖွင့်အရေးယူ ထားကြောင်း သိရသည်။
52. ငါးသိုင်းချောင်း ငဝန်မြစ်ရေ စိုးရိမ်ရေမှတ်သို့ရောက်ရှိ၊ သတိပေးချက်များ ထုတ်ပြန်	-TimeAyeYar
#ပြည်တွင်း	(05h ago)
ဖွင့်ရန်။ ငါးသိုင်းချောင်း ငဝန်မြစ်ရေ စိုးရိမ်ရေမှတ်သို့ရောက်ရှိ၊ သတိပေးချက်များ ထုတ်ပြန်
ငါးသိုင်းချောင်း သြဂုတ် ၁၅
ပုသိမ်ခရိုင် ရေကြည်မြို့နယ်၊ ငါးသိုင်းချောင်းမြို့ ငဝန်မြစ်ရေသည် သြဂုတ်၁၅ ရက် နံနက် ၆ နာရီတွင် မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ တိုင်းထွာချက်အရ ၁၁၆၁ စင်တီမီတာ စိုးရိမ်ရေမှတ်အထက် တစ်စင်တီမီတာတွင် ရောက်ရှိနေပြီး မြို့နယ်ဆည်/ရေဦးစီးဌာန ငဝန်ရေကာတာ၏ စိုးရိမ်ရေမှတ်မှာ ၂၇ ပေဖြစ်ပြီး ယနေ့နံနက်တွင် ၂၈ ဒသမ ၃ဝ ပေ ရေကာတာစိုးရိမ်ရေမှတ်အထက် တစ်ပေခွဲခန့် ကျော်လွန်ရောက်ရှိလျက်ရှိသည်။
ငါးသိုင်းချောင်းမြို့၌ ငဝန်ရေကာတာ ရေဘေးကာကွယ်မှု ဧရိယာအတွင်းရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁ စုနှင့် ငဝန်မြစ်၏အနောက်ဘက်ကမ်း
ရေကာတာ၏ ရေဘေးကာကွယ်မှုဧရိယာပြင်ပ ငဝန်မြစ်ကမ်းဘေး၌ ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာအုပ်စု ၂၇ စု စုစုပေါင်း ၃၈ အုပ်စုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ မြစ်ကမ်းဘေးရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စုများတွင်လည်း လက်ရှိမြစ်ရေအခြေအနေ၌ ဒေသခံများပုံမှန်ဆက်သွယ် သွားလာလျက်ရှိနေပြီး ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် တိုင်းဒေသကြီးခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေဖြင့် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ငဝန်ရေကာတာ၊ငါးသိုင်းချောင်းမြို့တွင်း ရေကာတာအပါအဝင် တာမိုင်စုစုပေါင်း၂၂ မိုင်၌ ယခုနှစ်မိုးရာသီကာလမတိုင်မီ ရေ ကာတာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းများ အချိန်မီပြီးစီးခဲ့ရာ ရေကာတာကြံ့ခိုင်မှုအခြေအနေမှာလည်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိသည်။
ရေကာတာများ၌ သက်ဆိုင်ရာဆည်/ရေဌာနမှ ဌာနရေကင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊အရေးပေါ်ရေဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ စုဆောင်း
ခြင်းနှင့် ရေကာတာပြင်/ထိန်းလုပ်ငန်းများ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးမှ မြစ်ရေအခြေအနေသတိပေးချက်များကို ဒေသခံပြည်သူများသို့ အဆက်မပြတ်ထုတ်ပြန်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ မြို့နယ်အတွင်းရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများအားလုံး ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
51. နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံ	-TimeAyeYar
ဖွင့်ရန်။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လွတ် လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ သံအမတ်ကြီး ရိုဆာရီယိုမယ်နာလိုနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသည့် ဦးမြသိန်း၊ သံအမတ်ကြီး ကင်ဇိုအိုရှီးမား၊ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်တို့အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံ သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ကော်မရှင် အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ၊ ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်း တာဝန်သတ်မှတ်ချက် အတည်ပြုရေး ကိစ္စ၊ ကော်မရှင်အား အထောက်အကူ ပြုမည့် အတွင်းရေးမှူးရုံးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ရေးတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ ကြသည်။
တွေ့ဆုံရာသို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း၊ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသားအစီအစဉ်တစ်ရပ်အနေဖြင့် လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၃ဝ ရက်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
50. ဓာတ်ပုံ ထိန်ဝင်း၏ နှစ် (၃ဝ) ပြည့် ရှစ်လေးလုံးလူထုအုံကြွမှု ဓာတ်ပုံပြပွဲ လောကနတ်ပန်းချီပြခန်း၌ ပြသမည်	-TimeAyeYar
ဖွင့်ရန်။ ဓာတ်ပုံ ထိန်ဝင်း၏ နှစ် (၃ဝ) ပြည့် ရှစ်လေးလုံးလူထုအုံကြွမှု ဓာတ်ပုံပြပွဲ လောကနတ်ပန်းချီပြခန်း၌ ပြသမည်
ဓာတ်ပုံ ထိန်ဝင်း၏ နှစ် (၃ဝ) ပြည့် ရှစ်လေးလုံးလူထုအုံကြွမှု ဓာတ်ပုံပြပွဲကို သြဂုတ် ၁၈ ရက်မှ ၂ဝ ရက်အထိ နေ့စဉ်နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ ကျောက်တံတား မြို့နယ် ပန်းဆိုးတန်းလမ်းရှိ လောကနတ်ပန်းချီပြခန်း၌ ပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဓာတ်ပုံ ထိန်ဝင်း (ဦးထိန်ဝင်း) သည် \_'\_'၁၉၈၈ လူထု အုံကြွမှု\_'\_' သမိုင်းဝင်ရှားပါးဓာတ်ပုံများအား သြဂုတ်လဆန်း မှ အာဏာသိမ်းယူသည့်အချိန်ထိ လူထုလှုပ်ရှားမှုများကို နေ့စဉ်မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးထားခဲ့ပြီး အဆိုပါ ဓာတ်ပုံများကို လာမည့်ဓာတ်ပုံပြပွဲတွင် ပြသသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဓာတ်ပုံ ထိန်ဝင်းက \_'\_'ရှစ်လေးလုံးကာလ သြဂုတ် လဆန်းကနေ အာဏာသိမ်းတဲ့ရက် စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်အထိ ရိုက်ထားတာပါ။ မှတ်တမ်းတင်ထားမယ် ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ လိုက်ရိုက်ထားတာပါ။ ပြသတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ရှစ်လေးလုံးလူထုအုံကြွမှုကြီးကို မမြင် လိုက်ရတဲ့သူတွေ ဒါကိုပြန်မြင်စေချင်တယ်။ ဘာကြောင့် ဖြစ်တာလဲ။ ဘယ်လိုလှုပ်ရှားကြသလဲဆိုတာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူ တွေအချို့ကလည်း မေ့ချင်မေ့နေမှာပေါ့။ ဒါကို ပြန်ပြီး ကြည့်စေချင်တယ်။ အဲဒီသဘောပါပဲ။ မှတ်တမ်းအဖြစ် သိမ်းထားလိုသူတွေကိုလည်း ရောင်းပေးသွားပါမယ်\_'\_' ဟု ပြောသည်။
ဓာတ်ပုံထိန်ဝင်းသည် ၄င်းရိုက်ကူးခဲ့သည့် ၁၉၈၈ လူထုအုံကြွမှု သမိုင်းဝင်ရှားပါးဓာတ်ပုံများကို နယ်သာလန် နိုင်ငံရှိ မော်ကွန်းတိုက်သို့ ပေးပို့ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုမှ ပြန်လည်တောင်းယူ၍ ပြသခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
\_'\_'အဲဒီတုန်းကရိုက်ထားတဲ့ နဂ္ဂတစ်တွေကို ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေသုံးဦးဆီမှာ သိမ်းထားခိုင်းပါတယ်။ ဒါကိုစစ်ဆေး မယ်ဆိုတာကြားလို့ သူတို့က မီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဆီမှာကျန်နေတဲ့ တစ်ဝက်ကို သိမ်းထားရင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့ယူဆပြီး နယ်သာလန်မှာရှိတဲ့ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေထံ ပို့ထားတာပါ။ အခုက နယ်သာလန် မော်ကွန်းတိုက်မှာသိမ်းထားတဲ့ ကျွန်တော့်ဓာတ်ပုံတွေကို ပြန်ကူးပြီး ပြသရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလ လောက်က ပို့လိုက်တာကို ပြန်ကူးတာပါ။ ကျွန်တော့်ဆီမှာ ဓာတ်ပုံပေါင်း ၆ဝဝ ကျော်လောက်ရှိပါတယ်\_'\_'ဟု ဓာတ်ပုံ ထိန်ဝင်းက ပြောသည်။
ဓာတ်ပုံထိန်ဝင်းရိုက်ကူးခဲ့သည့် \_'\_'၁၉၈၈ လူထု အုံကြွမှု\_'\_' သမိုင်းဝင်ရှားပါးဓာတ်ပုံများကို သြဂုတ် ၈ ရက် မှ ၁၂ ရက်အထိ ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ဗိဿနိုးပန်းချီပြခန်း၌ ပြသခဲ့ပြီး အားလုံးလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် လောကနတ်ပန်းချီပြခန်းတွင် ထပ်မံပြသခြင်း ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံထိန်ဝင်းသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ သည့် ၁၉၇၄ ဒီဇင်ဘာလ \_'\_'ဦးသန့် ဈာပနအရေးအခင်း\_'\_' တွင်လည်း ဓာတ်ပုံများ လျှို့ဝှက်ရိုက်ကူး၍ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် တွင် \_'\_'၁၉၇၄ ခု ဦးသန့်အရေးအခင်း\_'\_' ဓာတ်ပုံဆောင်းပါး စာအုပ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံထိန်ဝင်း (ဦးထိန်ဝင်း) ကို ၁၉၄၆ တွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၉၆၆ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၄ ခုနှစ်အထိ ရန်ကုန် ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သော်လည်း ဆေးပညာဘွဲ့ ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပေ။
49. လာကာဇက်တီနှင့်အတူ ပွဲထွက်ကစား ခိုင်းရန် နည်းပြအမ်မရီကို အူဘာမီယန်း တောင်းဆို	-TimeAyeYar
ဖွင့်ရန်။ လာကာဇက်တီနှင့်အတူ ပွဲထွက်ကစား ခိုင်းရန် နည်းပြအမ်မရီကို အူဘာမီယန်း တောင်းဆို
လန်ဒန် သြဂုတ် ၁၅
ရာသီအဖွင့် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွင် မန်စီးတီးကို နှစ်ဂိုးပြတ်ရှုံးခဲ့ရသော အာဆင်နယ် အသင်းမှ ဂါဘွန်တိုက်စစ်မှူး အူဘာမီယန်းက မိမိနှင့် ပြင်သစ် တိုက်စစ်မှူး လာကာဇက်တီတို့ကို ပွဲထွက်စာရင်းတွင် အတူထုတ်သုံးရန် နည်းပြ အမ်မရီအား တိုက်တွန်း ခဲ့သည်။
လာကာဇက်တီသည် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် အာဆင်နယ်သို့ စတင် ရောက်ရှိခါစက ခြေစွမ်းပြ ဂိုးများ သွင်းယူနိုင်သော်လည်း ပြီးခဲ့သည့် ဇန်န၀ါရီဈေးကွက်တွင် အူဘာမီယန်း ဒေါ့မွန်မှ ပြောင်းရွှေ့ ရောက်ရှိ လာပြီးနောက် ပုံမှန် ပွဲထွက်ခွင့် မရသလို နှစ်ဦးသား ကစားပုံ နေရာတူနေခြင်းကြောင့် အရန်ကစားသမား ဘ၀ရောက်ခဲ့ရပြီး မန်စီးတီးနှင့် ပွဲတွင်လည်း ဒုတိယပိုင်းရောက်မှ လူစားဝင်ခွင့် ရခဲ့သည်။
အူဘာမီယန်းက \_'\_'ကျွန်တော်နဲ့ လာကာဇက်တီ တို့နှစ်ဦး တိုက်စစ်မှာ ကောင်းကောင်းတွဲ ကစားနိုင်မှာပါ။ ကွင်းထဲရောက်ရင် သူနဲ့နေရာ မထပ် အောင် ကျွန်တော် ကစားပါ့မယ်။ မန်စီးတီးနဲ့ပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ တွဲဖက်ကစားနိုင်ခဲ့တယ်။ လာကာဇက်တီက တိုက်စစ်ဗဟိုနေရာမှာ နေရာယူထားရင် ကျွန်တော် ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ကစားရမယ်လ်လို့ စိတ်ထဲမထားဘဲ သူနဲ့ တွဲဖက်ညီစွာ ကစားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။
နှစ်ယောက်စလုံး အကောင်းဆုံးပေါင်း ကစားနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အသင်းက နည်းပြသစ်နဲ့ အသားကျဖို့ အချိန်ယူရဦးမှာ ဖြစ်ပေမယ့် သူ့ကစားဟန်က တစ်ဖက်ကို ဖိအားပေးပြီး အကောင်းဆုံး ကစားနိုင်တဲ့ နည်းစနစ်ဖြစ်လို့ နောက်ပိုင်း အောင်မြင်မှာပါ” ဟု ပြောခဲ့သည်။
48. အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ အုပ်စုအဖွင့် ပွဲတွင် မြန်မာအသင်းနှင့် မြောက်ကိုရီးယား အသင်း အမှတ်ခွဲယူ	-TimeAyeYar
ဖွင့်ရန်။ အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ အုပ်စုအဖွင့် ပွဲတွင် မြန်မာအသင်းနှင့် မြောက်ကိုရီးယား အသင်း အမှတ်ခွဲယူ
ရန်ကုန် သြဂုတ် ၁၅
အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ အမျိုးသား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အုပ်စု (စ) ပထမနေ့ကို ယနေ့ ညနေပိုင်း တွင် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ၌ ကျင်းပရာ မြန်မာအသင်းနှင့် မြောက်ကိုရီးယား အသင်းတို့ တစ်ဂိုးစီ သရေကျ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အာရှအားကစား ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာအသင်း၏ ပွဲဦးထွက်ပွဲမှာ ရလဒ်ကောင်းဖြင့် စတင်နိုင်ခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ပြိုင်ပွဲတွင် ဒုတိယရခဲ့သည့် မြောက်ကိုရီးယား အသင်းထံမှ အမှတ်ခွဲယူနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာအသင်းသည် မြောက်ကိုရီးယား အသင်းကို အပြန်အလှန် ကစားနိုင်ခဲ့ပြီး တိုက်စစ်ပိုင်းက ဂိုးသွင်းခွင့် ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သလို ဂိုးသမား ကျော်ဇင်ထက်၏ လက်စွမ်းပြ မှုကြောင့်လည်း အဖွင့်လှခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာအသင်းသည် အုပ်စုကျပ် အတွင်းကျ ရောက်နေသော်လည်း အဖွင့်ပွဲမှာပင် အမှတ်ရယူနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာအသင်းသည် အောင်သူ၊ မောင်မောင်စိုး၊ မောင်မောင်လွင်၊ ရန်နိုင်ဦး၊ လှိုင်းဘိုဘို၊ လွင်မိုးအောင်၊ နန္ဒကျော်၊ ဝင်းမိုးကျော်၊ ထိုက်ထိုက်အောင်၊ ဇော်မင်းထွန်း၊ ကျော်ဇင်ထက် (ဂိုး)တို့ဖြင့် ပွဲထွက်ခဲ့သည်။ ပွဲအစတွင် မြောက်ကိုရီးယား အသင်းက ပိုဖိ ကစားနိုင်ခဲ့ပြီး မြန်မာ နောက်ခံလူများ ခက်ခက်ခဲခဲ ထိန်းချုပ်ခဲ့ရသည်။ မြောက်ကိုရီးယားအသင်း ဂိုးရနိုင်သည့် အခွင့်အရေး အချို့ရခဲ့သော်လည်း မြန်မာဂိုးသမား ကျော်ဇင်ထက် ကာကွယ်နိုင်ခဲ့သည်။
မြန်မာယူ-၂၃ အသင်းသည် မိနစ် ၂ဝ နောက်ပိုင်းတွင် မြောက်ကိုရီးယားဘက်သို့ ပြန်လည် ခြိမ်းခြောက်လာနိုင်၍ ဂိုးရနိုင်သည့် အခွင့်အရေးများ ဖန်တီးလာနိုင်ပြီး ၄၅ မိနစ်တွင် မြန်မာအသင်း ဂိုးစရခဲ့သည်။ ဒုတိယပိုင်းတွင် မြောက်ကိုရီးယား အသင်းက ချေပဂိုးရရန် တိုက်စစ် အားမြှင့်လာသလို မြန်မာအသင်းကလည်း ဂိုးပြန်မပေး ရရေးအတွက် ခံစစ် ကစားသမား များထည့်ကာ ခံစစ်အားပြု ကစားခဲ့သည်။ ၅၅ မိနစ်တွင် မြောက်ကိုရီးယား အသင်း ဂိုးပြန်ရခဲ့သည်။ ဂိုးရပြီး နောက်ပိုင်းတွင် မြောက်ကိုရီးယားအသင်း ဂိုးထပ်ရရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း ကျော်ဇင်ထက် လက်စွမ်းပြ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့၍ ဂိုးထပ်မပေးရခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာ အသင်းသည် တန်ပြန် တိုက်စစ်ဖြင့်သာ ကစားခဲ့ပြီး ၆၇ မိနစ်တွင် အောင်သူ ကန်ခွင့် ရခဲ့သော်လည်း ဘားထိထွက်ခဲ့၍ နစ်နာခဲ့ရသည်။ အုပ်စု(စ) အခြားပွဲတွင် အီရန်အသင်းနှင့် ဆော်ဒီ အသင်းတို့ ဂိုးမရှိ သရေကျခဲ့သည်။ မြန်မာအသင်းသည် ဒုတိယပွဲအဖြစ် သြဂုတ် ၁၇ ရက်တွင် ဆော်ဒီအာရေဗျ အသင်းနှင့် ယှဉ်ပြိုင် ကစားရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
47. ပုဂံရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေရှိ မြင်ကွင်းအလှကို ကြည့်ရှု ခံစားနိုင်မည့် အမိုးဖွင့် မင်္ဂလာဘတ်စကား ခရီးစဉ် သြဂုတ် ၂ဝ ရက်တွင် စတင် ပြေးဆွဲမည်	-TimeAyeYar
ဖွင့်ရန်။ ပုဂံရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေရှိ မြင်ကွင်းအလှကို ကြည့်ရှု ခံစားနိုင်မည့် အမိုးဖွင့် မင်္ဂလာဘတ်စကား ခရီးစဉ် သြဂုတ် ၂ဝ ရက်တွင် စတင် ပြေးဆွဲမည်
ညောင်ဦး သြဂုတ် ၁၅
ပုဂံရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေရှိ မြင်ကွင်းအလှကို ကြည့်ရှု ခံစားနိုင်မည့် အမိုးဖွင့် မင်္ဂလာဘတ်စကား ခရီးစဉ်ကို သြဂုတ်၂ဝ ရက်တွင် ပုဂံဒေသ၌ စတင်ပြေးဆွဲမည် ဖြစ်ကြောင်း Mingalarbus ဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးထံမှ သိရသည်။ အဆိုပါ ဝန်ဆောင်မှုကို သြဂုတ် ၂ဝ ရက်မှ စက်တင်ဘာ ၃ဝ ရက်အထိ ပရိုမိုးရှင်း ကာလအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး ယင်းကာလအတွင်း လက်မှတ်ခအနေဖြင့် ပြည်တွင်း ခရီးသည် တစ်ဦးလျှင် ငွေကျပ် ၅ဝဝဝ ဖြစ်ကာ နိုင်ငံခြား ခရီးသွား ဧည့်သည်တစ်ဦးလျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅ ဒေါ်လာ ကျသင့်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပုံမှန်ဈေးနှုန်းမှာ ပြည်တွင်း ခရီးသည်တစ်ဦးလျှင် ငွေကျပ် ၁ဝဝဝဝ၊ နိုင်ငံခြားခရီးသွား ဧည့်သည်တစ်ဦးလျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၅ ဒေါ်လာ သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။
\_'\_'သြဂုတ် ၂ဝ ရက်ကနေ စက်တင်ဘာ ၃ဝ ရက်အတွင်း ပရိုမိုးရှင်းကာလအဖြစ် လျှော့ဈေးနဲ့ ပြေးဆွဲပေးမှာပါ။ ဒီကာလပြီးရင်တော့ ဈေးနှုန်း အပြောင်းအလဲရှိပါတယ်\_'\_'ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
အမိုးဖွင့် မင်္ဂလာဘတ်စကား ဝန်ဆောင်မှုကို Aquamarine Ecotourism Development ကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ကနဦး အနေဖြင့် ပုဂံဒေသ၌ အမိုးဖွင့် မင်္ဂလာဘတ်စကား သုံးစီးဖြင့် ပြေးဆွဲမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကို ရန်ကုန်မြို့၌ မတ်လက စမ်းသပ် ပြေးဆွဲခဲ့ပြီး မန္တလေးနှင့် ပြင်ဦးလွင်မြို့ တို့၌လည်း ယာဉ်တစ်စီးဖြင့် တိုးချဲ့ ပြေးဆွဲရန် ဆောင်ရွက်ထားကာ စင်းလုံးငှားယာဉ် အဖြစ်လည်း ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ရန်ကုန်မြို့၌ စမ်းသပ်ကာလအဖြစ် မတ်လတစ်လလုံး ပြေးဆွဲခဲ့ပြီး ပြည်သူများ စိတ်ဝင်စားမှု ရှိသဖြင့် ပုဂံဒေသ၌ စတင်ပြေးဆွဲခြင်း ဖြစ်ကာ ရန်ကုန်မြို့၌ အောက်တိုဘာလတွင် စတင်ပြေးဆွဲမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် Aquamarine Ecotourism Development ကုမ္ပဏီသည် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်က စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး သဘာဝအခြေခံ ခရီးသွား လုပ်ငန်းကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ရည်ရွယ်၍ အမိုးဖွင့် မင်္ဂလာ အပန်းဖြေ ဘတ်စကားများ ပြေးဆွဲခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
46. အီတလီနိုင်ငံ၌ အမြန်လမ်းမရှိ တံတားတစ်စင်းပြိုကျ	-TimeAyeYar
ဖွင့်ရန်။ အီတလီနိုင်ငံ၌ အမြန်လမ်းမရှိ တံတားတစ်စင်းပြိုကျ
ရောမ သြဂုတ် ၁၄
အီတလီနိုင်ငံ ဂျီနိုအာဆိပ်ကမ်းမြို့မြောက်ပိုင်း အမြန်လမ်းမရှိ တံတားတစ်စင်းသည် သြဂုတ် ၁၄ရက်တွင် ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင် ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောသည်။ အဆိုပါတံတားပြိုကျမှု၌ လူဒါဇင်ပေါင်းများစွာ သေဆုံးကြောင်း ဒေသဆိုင်ရာလူနာတင်ယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနမှ အကြီးအကဲ၏ ပြောဆိုချက်ကို ကိုးကား၍ Adnkronos သတင်းဌာနက ဖော်ပြသည်။
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းနေသည့် သြဂုတ် ၁၄ ရက် ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁၁ နာရီခွဲတွင် တံတားပြိုကျမှု ဖြစ်ပွား ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသတွင်း မီးသတ်တပ်ဖွဲ့က ပြောသည်။ ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားသည့် တံတားကို ၁၉၆ဝ ပြည့်နှစ် နောက်ပိုင်းတွင် A10 အမြန်လမ်းမကြီး၌ တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
တံတားပြိုကျမှုဖြစ်ပွားချိန်တွင် တံတားပေါ်၌ မောင်းနှင်နေသော ကားအစီးရေမှာ ရှစ်စီး သို့မဟုတ် ကိုးစီးအကြား ရှိကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတစ်ဦးက Sky Italia ရုပ်သံသို့ပြောသည်။ အလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်အဖြစ်အပျက်ကြောင့် စိုးရိမ် ထိတ်လန့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင် ရေးဝန်ကြီး ဒါနီလို တိုနီနယ်လီက ပြောသည်။
တံတားပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၂ဝ ဦး ထက်မနည်းရှိနိုင်ကြောင်း၊ အပျက်အစီးများကြားတွင် လူများစွာ ရှိနေနိုင်ကြောင်းနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသူ ၁ဝ ဦးကို ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ဒေသ တွင်းသတင်းဝက်ဆိုက် ဖြစ်သော Il Secolo XIX က ဖော်ပြထားသည်။
45. မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်း၍ မြေပြင်လှည့်ကင်းဆောင်ရွက်	-TimeAyeYar
ဖွင့်ရန်။ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်း၍ မြေပြင်လှည့်ကင်းဆောင်ရွက်
မောင်တောမြို့နယ် နယ်မြေ (၂)အမှတ်(၁) နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲ ငါးရန့်ချောင်းကင်းစခန်းမှ ဒုတိယ ရဲမှူးအောင်ကျော်ကျော် ဦးစီးသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ အမှတ် (၃၄)BGBတပ် Gorijonbuniya ကင်းစခန်းမှ ဒုစခန်းမှူး Naib Subedar Md. Sultan Ahmad ဦးစီးသည့် ၁၅ ဦးတို့ သည် သြဂုတ် ၁၄ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီ မိနစ် ၂ဝ မှ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ ထိ မိမိတို့ နိုင်ငံအသီးသီးအတွင်းရှိ နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးလမ်းအတိုင်း နယ် နိမိတ် မှတ်တိုင် (၄ဝ)မှ (၄၁)အထိ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်း၍ မြေပြင် လှည့်ကင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
အလားတူ သြဂုတ် ၁၄ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီ ၁ဝ မိနစ်က မောင်တောမြို့
နယ်မြေ(၅)၊ အမှတ်(၂)နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲ ငါးခူရနယ်မြေရုံးမှ ဒုတိယရဲမှူး ထွန်းထွန်း ဦးစီး သည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်ရှစ်ဦးသည် ရေယာဉ်တပ်ဖွဲ့စု (မောင်တော)မှ အမြန်သွားတိုက်ခိုက်ရေးရေယာဉ် နှစ်စင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အမှတ် (၂)နယ်ခြားစောင့်တပ်မှ Naib Subedar Sha Alome ဦးစီး ၁၁ ဦးသည် စက်တပ်ရေယာဉ် နှစ်စင်းဖြင့် လည်းကောင်း စံပါယ်ပင်ရင်းချောင်းဝ ထိပ် နတ်မြစ်အလယ် နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်အနီးဆုံရပ် ရေမိုင် ၁၁ ၌ တွေ့ဆုံ၍ နတ်မြစ်ကြောင်းအတိုင်း ညှိနှိုင်းကင်းလှည့်ခဲ့ရာ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ပြူးမ ချောင်း ချောင်းဝအနီး ရေမိုင် ၁၄ နှင့် ၁၅ ကြားသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
44. ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်နေခြင်းကြောင့် မြန်မာရွှေဈေးနှုန်း အတက်ဘက်သို့ ဦးတည်	-TimeAyeYar
#ပြည်တွင်း	(08h ago)
ဖွင့်ရန်။ ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်နေခြင်းကြောင့် မြန်မာရွှေဈေးနှုန်း အတက်ဘက်သို့ ဦးတည်
ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးနှုန်းကျဆင်းသော်လည်း ဒေါ်လာဈေး မြင့်တက်နေခြင်း ကြောင့် မြန်မာရွှေဈေးနှုန်း အတက်ဘက်သို့ ဦးတည်နေကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းထံမှ သိရ သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေလုပ်ငန်း ရှင်များအသင်း ပြန်ကြားရေးမှူး ဦးအေးချိုက \_'\_'လက်ရှိ ရွှေဈေးကွက် အနေအထားက ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးနှုန်းက တအားကျနေတယ်။ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးက ကျပြီး မြန်မာ့ရွှေဈေးက ဘာလို့ မကျလဲ ဆိုရင် တစ်ဖက်မှာ ဒေါ်လာဈေးက စံချိန် တင် အမြင့်ဆုံးဈေး ကျပ် ၁၅ဝဝ ဖြစ်နေ တယ်။ အဲဒီတော့ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးကျပြီး ဒေါ်လာဈေးတက်တဲ့ အတွက် မြန်မာ့ ရွှေဈေးကမကျဘဲ လက်ရှိအနေနဲ့က ဒီနေ့ပေါက်ဈေး ဆိုရင် ကျပ် ၉၄၈၅ဝဝ ဈေးလောက်နဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေတယ်\_'\_' ဟု ပြောသည်။
၂ဝ၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ရွှေဈေး နှုန်းသည် ကျပ် ၉၁ဝဝဝဝ ခန့်ရှိရာမှ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ရွှေဈေးနှုန်းသည် ကျပ် ၉၅ဝဝဝဝ ခန့်ရှိသဖြင့် တစ်နှစ်တာ ကာလအတွင်း ငွေကျပ်လေးသောင်းနီးပါး ဈေးတက်ခဲ့သည်။ ဒေါ်လာဈေးတက်ခြင်း နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ရေကြီးရေလျှံမှု ဖြစ်ပွားသဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်းသည်လည်း အရောင်း အဝယ်နည်းပါးသော အချက်တစ်ချက်ဖြစ် ကြောင်း ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တို့က ဆိုသည်။
ရွှေဆိုင်ကြီးများ အရောင်းအဝယ် ကောင်းမှသာ အခေါက်ရွှေများ ရောင်းရ မည်ဖြစ်ပြီး ပန်းထိမ်သမားများလည်း အလုပ်အကိုင် ကောင်းမည်ဖြစ် သည်။ ရွှေဝယ်ယူစုဆောင်း သူများအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းအတက်တွင် အမြတ်အစွန်း အထိုက်အလျောက်ရပါက ပြန်လည် ရောင်းချကြလေ့ ရှိကြောင်း သိရသည်။ ဈေးနှုန်းအမြင့်သို့ရောက်လျှင် ပြန် ရောင်းချလေ့ရှိပြီး ဈေးနှုန်းကျဆင်းသည့် အခါတွင် ပြန်လည်ဝယ်ယူ စုဆောင်းတတ် လေ့ရှိသည်ဟု သိရသည်။
\_'\_'ဈေးမြင့်ရင် အရောင်းအဝယ် မကောင်းဘူး။ ဈေးနိမ့်ရင် အရောင်း အဝယ်ကောင်းတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် ဈေးမြင့်ရင်လူတွေက လိုက်မဝယ်ချင်ဘူး။ ကျသွားရင် လိုက်ဝယ်တယ်\_'\_'ဟု ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ ဦးအေးချိုက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
ယခုနှစ် သြဂုတ်၊ စက်တင်ဘာ၊ အောက်တိုဘာလများတွင် ရွှေဈေးနှုန်း များ သိသာစွာကျဆင်းခြင်းမျိုး ရှိနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း ရွှေလုပ်ငန်းရှင် တို့က သုံးသပ်ကြသည်။ ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်သော နိုဝင်ဘာလနှင့် ဒီဇင်ဘာလများတွင်မူ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရွှေများပြန်ထွက်လာ ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင် ဘတ်ဂျက်ပိတ်ချိန်၊ စာရင်းပိတ်ချိန်များ တွင်မူ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးနှုန်း တည်ငြိမ်ပြီး ဈေးနှုန်းကျဆင်းမှု ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိ ကြောင်း သိရသည်။
ဓာတ်ပုံ - ထိန်လင်း
43. ရန်ကုန	-TimeAyeYar
#ပြည်တွင်း	(10h ago)
42. ပုံစံခွက်ထဲက ဖောက်ထွက်ရဲကြပါ	-TimeAyeYar
#Gov	(1d ago)
ဒီနေ့(၁၂.၈.၁၇) မှာ ယောက်ခ်လမ်းထဲ(ယောမင်းကြီးရပ်ကွက်) မြို့တော်ဝန်လာတယ်ဆိုလို့ မနက်စာရောင်းတဲ့ လမ်းဘေးဆိုင်တွေရော ပန်းဆိုင်တွေရော အကုန်ပိတ်ရတယ်။ နောက်ပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းမပေါ် ဒဂုံပန်းခြံ နားက ဆောက်လုပ်ရေးမှတ်တိုင်က ဆိုင်တွေလည်း အကုန်ပိတ်ပေးရတယ်။ ဂျာနယ်ဆိုင်တွေကတော့ တစ်ရက် မရောင်းရင် အရှုံးဖြစ်ပြီမို့ ဖြစ်သလိုလေးတွေ ခင်းပြီးရောင်းနေကြပေါ့။
ပြောချင်တာက အရင်ခေတ် အရင်အစိုးရတွေလက်ထက်တုန်းကလည်း လူကြီးလမ်းကြောင်းဆိုရင် ဒီလိုလမ်းဘေး ဆိုင်တွေ အကုန်ပိတ်၊ အကုန်ရှင်း။ အဲ.. နောက်နေ့ကျတော့ ပြန်ဖွင့်ကြ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ပြီးနေကြတာပဲ။ အခုရော ဘာထူးသွားသေးလဲ။
အဲဒီဆိုင်လေးတွေ ပိတ်လိုက်တော့ ဘာအကျိုးဖြစ်လဲ တွေးကြည့်ကြဦး။ သူတို့တွေ တစ်နေ့တာ ဝင်မယ့် ဝင်ငွေတွေ လျော့ကုန်မယ်။ အခက်အခဲတွေဖြစ်မယ်။
ဒီဆိုင်တွေက အဲဒီမြို့တော်ဝန်မဖြစ်ခင်ကတည်းက ခေတ်အဆက်ဆက်ရှိနေတဲ့ဆိုင်တွေ၊ ရောင်းနေတဲ့ဆိုင်တွေ။
စနစ်ကျချင်လို့ လုံးဝမရောင်းရလို့ သတ်မှတ်ရင်လည်း မပြောဘူး။
ခုဟာက လူကြီးလမ်းကြောင်း တစ်ရက်အတွက် အကုန်ပိတ်ပေးရတယ်။
စနစ်ဟောင်း လူဟောင်းတွေကို မကြိုက်လို့ စနစ်သစ် လူသစ်နဲ့ ပြည်သူတွေရွေးချယ်ထားတဲ့ အစိုးရလက်ထက်မှာလည်း အခုလို လူကြီးလမ်းကြောင်းဆိုပြီး ဘာမဟုတ် ညာမဟုတ် ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင်နဲ့ လမ်းဘေးဆိုင်တွေ အကုန်ပိတ်ပေးရတယ်။
အရင် ပုံစံခွက်ထဲကနေ ရုံးမထွက်ရဲ ဖောက်မထွက်ရဲကြ…..
ဂျာနယ်ရောင်းတဲ့ သူနဲ့က သူငယ်ချင်းလိုဖြစ်နေတော့ ဆိုင်အပိတ်ခံရတကို ဒီလိုပဲပေါ့ဆိုပြီး အပြုံးမပျက်ဘဲ ပြောရှာပါတယ်…. သူ့ရှေ့က ဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ ဦးကျော်ဇေယျာ(ဒဂုံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)တာင် ပိန်သွားတယ်တဲ့ (သူပြောချင်တာက အလုပ်တွေ အရမ်းပင်ပန်းလို့ပေါ့လေ)။
အဲဒီကောင်ဆို အရင် စစ်အစိုးရလက်ထက်ရော ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ရော လူကြီးလမ်းကြောင်းဆိုပြီး ဆိုင်အပိတ်ခံရရင် အမြဲဆဲနေတဲ့သူ။ ခုတော့ ပြည်သူ့အစိုးရလက်ထက် ဘာလုပ်လုပ် မှန်တယ် ကောင်းတယ်ဆိုပြီး အမြဲထောက်ခံတယ်။
သူဆိုရင် (အရင် ဆိုင်ပိတ်လို့ ဆဲနေကြကနေ) ပုံစံခွက်ကနေ ဖောက်ထွက်ပြီး (ဆိုင်ပိတ်ခံရတာတောင် လက်ခံပြီး) အစိုးရကို ထောက်ခံပေးတဲ့သူ။
ဒီလိုမျိုး ပြည်သူတွေက ရဲရဲဝံဝံ အားပေးနေကြ.. ထောက်ခံနေကြ…. တာတောင်
အစိုးလူကြီးမင်းများနဲ့ အမတ်မင်းများက အရင်ပုံစံခွက်တွေကနေ ဖောက်မထွက်ရဲကြပဲနဲ့ သူတို့ လမ်းကြောင်းဆိုတာနဲ့ လမ်းဘေးဆိုင်တွေကို ပိတ်ခိုင်းနေလေရဲ့။ (အဲဒါက ဘာများ အကျိုးရှိမှာလဲ...)
အစိုးရလူကြီးမင်းတွေ အမတ်မင်းလည်း အရင်ပုံစံခွက်ကနေ ဖောက်ထွက်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့ တစ်သားတည်း အတူတူ ရှိနေပေးကြပါတော့ ……….
41. ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၌ သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေ၊ အမျိုးသားတစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိမှုဖြစ်ပွား	-TimeAyeYar
#Crime	(1d ago)
နေပြည်တော်၊ ဩဂုတ် ၁၄
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်အချိန် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မြရည်နန္ဒာမြို့သစ်၊ လမ်းသွယ်(၁)ရပ်ကွက် ၅၅×၅၆ လမ်းကြား၌ ကျော်ပုလင်း ကချင်ရိုးရာခေါင်ရည်ဆိုင်ရောင်းချသည့် ဦးလီဆွမ်(ခ)ဇော်လင်း(၄၀)နှစ်မောင်းနှင်ပြီး ဇနီး မဟော်လောက်ဖိန် (၄၀)နှစ်လိုက်ပါလာသည့် ဆိုင်ကယ်သည် ၅၅ လမ်းအနောက်ဘက်ခြမ်း ရွာလယ်လမ်းနှင့် နှင်းဆီ လမ်းကြားအရောက်၌ အမျိုးသားတစ်ဦးက ၎င်း၏ဆိုင်ကယ်ဖြင့်ဝင်တိုက်ပြီး မဟော်လောက်ဖိန်၏ လက်ထဲမှ လက်ကိုင်အိတ်အား လုယူခဲ့ကြောင်း၊ ဦးလီဆွမ်(ခ)ဇော်လင်းက ပြန်လည်လုယူသဖြင့် ၎င်းအမျိုးသားက ပစ္စတိုသေနတ်ဖြင့် ၃ ချက် ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ မဟော်လောက်ဖိန်တွင် နဖူးကျည်ဖောက်ဝင် ဒဏ်ရာ ၁ ချက်ရရှိ၍ အခင်းဖြစ်နေရာတွင် သေဆုံးခဲ့ပြီး ဦးလီဆွမ်(ခ)ဇော်လင်းတွင် ဝဲရင်ဘတ် ကျည်ဖောက်ဝင်၊ ယာချိုင်းအောက် ကျည်ဖောက်ထွက်ဒဏ်ရာ ၁ ချက် (စိုးရိမ်ရ)ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်သူမှာ ထွက်ပြေးသွား၍ အနီးရှိ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြည်သူများက ဝိုင်းဝန်း ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ၅၃ လမ်းနှင့် မနော်ဟရီလမ်းထောင့်၌ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ အုန်းချောကျေးရွာ၊ (၆) ရပ်ကွက်နေ မောင်မျိုး(ခ)ခွန်ကောလား(၃၅)နှစ်(ဇာတိ-ကောင်ဝိန်းရပ်ကွက်၊ ကျောက်တလုံးကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်)အား ဆိုင်ကယ်(၁)စီး၊ ပွိုင့် ၃၂ ပစ္စတို ၁ လက်၊ ၎င်းကျည် ၂၂ တောင့်၊ ကျည်အိမ် ၂ ခု၊ ကျည်ခွံ ၁ ခု တို့နှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ စစ်ဆေးချက်အရ မောင်မျိုး(ခ)ခွန်ကောလား သည် လုယက်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့သောကြောင့် ၎င်းအား အောင်ပင်လယ်နယ်မြေရဲစခန်း(ပ)၅၈၀/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂/၃၉၄ ဖြင့် လည်းကောင်း၊ (ပ)၅၈၁/၂၀၁၈၊ လက်နက်များအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉(စ)ဖြင့်လည်းကောင်း အသီးသီး အမှုဖွင့် အရေး ယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
40. မမီးမီး ကွယ်လွန်သွားသည့်အတွက် ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန်သံရုံးကလည်း မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲ ရပါသည်	-TimeAyeYar
#Political Prisoner	(1d ago)
မမီးမီး ကွယ်လွန်သွားသည့်အတွက် ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန်သံရုံးကလည်း မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲ ရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် သူမ၏မမောနိုင်မပန်းနိုင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများက ဆက်လက်ရှင်သန်နေဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။
The U.S. Embassy in Yangon joins the people of Myanmar in mourning the death of Ma Mee Mee. Her tireless work on behalf of Myanmar and democracy will live on.
39. စပိန်စူပါဖလားတွင် ဘာစီလိုနာကို အီးယူ ပြင်ပကစားသမား ကြိုက်သလောက်ထည့်ကစားခွင့်ပြု၍ ဆီဗီလာတရားစွဲဖွယ်ရှိ	-TimeAyeYar
#ပြည်တွင်း	(2d ago)
ဖွင့်ရန်။ စပိန်စူပါဖလားတွင် ဘာစီလိုနာကို အီးယူ ပြင်ပကစားသမား ကြိုက်သလောက်ထည့်ကစားခွင့်ပြု၍ ဆီဗီလာတရားစွဲဖွယ်ရှိ
ဆီဗီး သြဂုတ် ၁၃
စပိန်စူပါဖလားအဖြစ် ယမန်နေ့ညက ဘာစီလိုနာ နှင့်ဆီဗီလာတို့ မော်ရိုကိုရှိ တန်ဂီယာမြို့၌ ကစားသည့် ပွဲစဉ်မတိုင်မီ ၂၄ နာရီအလိုတွင် စပိန် ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်သည် ချမှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းကို ယခုတစ်ပွဲအတွက် ပယ်ဖျက်ကာ ဘာစီလိုနာ အသင်းကို ဥရောပယူနီယံပြင်ပကစားသမား (အီးယူ ပြင်ပကစားသမား) ကြိုက်သ လောက် ထည့် ကစားခွင့်ပြု ခြင်းအတွက် ဆီဗီလာအသင်းက မကျေမနပ်စောဒကတက်ခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲမှ နုတ်ထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် စပိန်ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်ကို တရားစွဲဆိုခြင်း ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသင်းတွစ် တာ စာမျက်နှာ၌ ရေးတင်ခဲ့သည်။
စပိန်၌ မည်သည့်ပြည်တွင်းပွဲစဉ်တွင်မှ အီးယူပြင်ပ ကစားသမားသုံးဦး ထက်ပို၍ မှတ်ပုံတင်ခွင့် မပြုဟု ပြဋ္ဌာန်းထားရာ ထိုစည်းကမ်းအတိုင်းဆိုလျှင် ဘာစီလိုနာသည် ယခုနွေရာသီမှ အသစ်ခေါ်ယူ ထားသော ဗီဒယ်(ချီလီ)၊ မယ်လ်ကွန်နှင့် အာသာမီလွန် (ဘရာဇီး)တို့နှင့်အတူ ဘရာဇီးနိုင်ငံသား ကော်တင်ဟို တို့ကို တစ်ပြိုင်တည်း မှတ်ပုံတင် ကစားခွင့်ရှိမည် မဟုတ်ပေ။
ထိုအခြေအနေကို စပိန်ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်က ယခု တစ်ပွဲတည်းတွင်သာ ခြွင်းချက်အဖြစ် လက်ခံသည်ဟု ထုတ်ပြန် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာစီလိုနာအသင်းသည် ထိုစနစ်ကြောင့် ကော်တင်ဟိုကို ပေါ်တူဂီနိုင်ငံသူအား လက်ထပ် ထားပြီး သုံးနှစ်ကြာချိန်တွင ပေါ်တူဂီနိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူခွင့်ရှိနေခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဘာစီလို နာက စီစဉ်နေသည်။
38. ထိုင်းနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ပြည်နယ်ကိုးခု၌ မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် ရေကြီးမှု ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေ	-TimeAyeYar
ထိုင်းနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ပြည်နယ်ကိုးခု၌ မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် ရေကြီးမှု ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေ
ဘန်ကောက် သြဂုတ် ၁၃
ထိုင်းနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ပြည်နယ်ကိုးခု၌ လက်ရှိတွင် မုတ်သုံမိုးရွာသွန်းနေမှုကြောင့် ရေကြီးမှု ဆက်လက်ဖြစ်ပွား နေခြင်းဖြစ် ကြောင်း အစိုးရအဖွဲ့ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက သြဂုတ် ၁၃ ရက်တွင်ပြောသည်။ နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသရှိ ယူဘွန် ရတ်ချာသာနီ၊ ယာဆိုသွန်၊ ကာလာဆင်၊ဆာကွန်နာခွန်၊ နာခွန်ဖနွန်နှင့် ဘူအန်ကန် ပြည်နယ်တို့အပါအဝင် နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းရှိ ဖတ်ချာဘူရီပြည်နယ်၌ ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားပြီး ဒေသခံ ၆၁ဝဝဝ ကျော်ရေကြီးမှု ဒဏ်ခံ စား ရကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် ယင်းဒေသများ၌ ယခုလအစော ပိုင်းမှစတင်၍ ရက်ပေါင်းများစွာကြာမိုးသည်းထန်စွာရွာပြီးနောက် စိုက်ပျိုးမြေ အများအပြားတွင် ရေလွှမ်းမိုးခဲ့ကြောင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးနှင့်လျှော့ချရေး ဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ချာယာပေါ က ပြောသည်။
နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်း၌ မဲခေါင်မြစ်ရေ တက်ကာ နာခွန်ဖနွမ်ပြည်နယ်အပါအဝင် မြေနိမ့်ပိုင်းဒေသများသို့ ရေလွှမ်း မိုးကြောင်း ချာယာပေါက ဆက်ပြောသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံအနေဖြင့် ယခုတစ်လလုံးတွင် မုတ်သုံမိုးရွာ သွန်းမှုနှင့်ကြုံ တွေ့ရမည်ဟု ခန့်မှန်း ရသော်လည်း တာဝန်ရှိသူများက ယင်းပြည်နယ်များ နှင့် အခြားနေရာများ၌ မြေပြိုမှုများဖြစ်ပွား နိုင်မှုအပါအဝင် ရေကြီးမှုကိုသက်သာစေရန်ဆောင်ရွက်ချက်များလုပ်ဆောင်ထားကြောင်း သိရသည်။
တော်ဝင်ဆည်မြောင်းဌာန အနေဖြင့် နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းဆူရတ်သာ နီပြည်နယ်ရှိ ရတ်ဂျာပရာ ဟာတာတမံ၊ နိုင်ငံအရှေ့ မြောက်ပိုင်း ဆာခွန်နာခွန်ပြည်နယ်ရှိ နမ်အမ်တာတမံ၊ နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း အတ်တာရာဒစ်ပြည်နယ်ရှိ ဆရီကစ် တာတမံနှင့် နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း တတ်ပြည်နယ်ရှိ ဘူမိဘော တာတမံ ကဲ့သို့ အဓိက တာတမံများကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့် လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
37. အမျိုးသမီးများ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့် လူမှုကွန်ရက် Applicationn များကို ပိုမိုအသုံးပြုနေ	-TimeAyeYar
ဖွင့်ရန်။ အမျိုးသမီးများ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့် လူမှုကွန်ရက် Applicationn များကို ပိုမိုအသုံးပြုနေ
ရန်ကုန် သြဂုတ် ၁၃
မြန်မာအမျိုးသမီးများ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အများဆုံး အသုံးပြုသည့် အရာသုံးခုတွင် လူမှုကွန်ရက် အသုံးပြုခြင်း၊ သတင်းများ ဖတ်ရှုခြင်းနှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းများ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
လူမှုကွန်ရက် အသုံးပြုခြင်းကို ငြီးငွေ့ပြီဟု ဆိုကြသော်လည်း ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းမှ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းကြားရှိအမျိုးသမီး အရေအတွက်သည် တခြားသော မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ယှဉ်လျှင် လူမှုကွန်ရက် Application များကို ပိုမိုအသုံးပြုနေကြသည်။ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအသုံးပြုရာတွင် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာများကိုသာ အချိန်အတော်ကြာကြာ အသုံးပြုကြသော်လည်း အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ နေ့စဉ် ကြားခံတစ်ရပ်အဖြစ် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက် အသုံးပြုကြပြီး တခြားစာတိုပေးပို့သည့် Application များအား အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။
အလုပ်ကိစ္စများအတွက် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ခေါ်ဆိုခြင်း၊ အင်တာနက်နှင့် အီးမေးလ်များအတွက် အသုံးပြုခြင်း၊ သီချင်းနားထောင်ခြင်း၊ ရုပ်ရှင်နှင့် ဇာတ်လမ်းတွဲများ ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ဂိမ်းကစားခြင်း အစရှိသည်တို့တွင်လည်း အသုံးပြုကြသည်ဟု မြန်မာ အမျိုးသမီးအများစုထံမှ သိရသည်။
တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတစ်ခုမှာ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသုံး၍ လုပ်ဆောင်သည့် အရာများအား စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် ကမ္ဘာ့အရှေ့ပိုင်းရှိနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ကမ္ဘာ့အနောက်ပိုင်းရှိ နိုင်ငံများသည် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများအား ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွင် အသုံးပြုမှုပိုမိုများပြားပြီး လုပ်ငန်းခွင်တွင် အသုံးပြုမှုနည်းပါးကြောင်း၊ နော်ဝေနှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံတို့၌ အမျိုးသမီးများ၏ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အသုံးပြုမှုမှ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အနည်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပြီး ညနေပိုင်း အချိန်တို့တွင် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများအား ပိတ်ထားနိုင်ရန် ကြိုးစားနေကြသည်ကိုတွေ့ရကြောင်း၊ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများမှ အမျိုးသမီးများသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လူနေမှုဘဝထက် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အသုံးပြုမှု ပိုမိုများပြားကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့မှ အမျိုးသမီးများသည် လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ဆက်စပ်သော စာတိုပေးပို့ခြင်းနှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ သည် ၎င်းတို့၏ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်မှု အများဆုံးစာရင်းတွင် အဆင့် (၄) နေရာနှင့် အဆင့် (၆) နေရာတွင်သာရှိကြောင်း သိရသည်။
36. မော်တော်ယာဉ် တိမ်းမှောက်မှုကြောင့်(၈၈)ငြိမ်း/ပွင့်မှ မမီးမီး သေဆုံး	-TimeAyeYar
ဖွင့်ရန်။ မော်တော်ယာဉ် တိမ်းမှောက်မှုကြောင့်(၈၈)ငြိမ်း/ပွင့်မှ မမီးမီး သေဆုံး
ကျောင်းကုန်း သြဂုတ် ၁၃
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်ခရိုင် ကျောင်းကုန်းမြို့နယ် သစ်ဆိမ့်ကုန်းအုပ်စု မကျီးကုန်းကျေးရွာအနီးတွင် သြဂုတ် ၁၃ ရက် ညနေ ၅ နာရီခန့်က မော်တော် ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်ပွားရာ (၈၈)ငြိမ်း/ပွင့်မှ မမီးမီး သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ရန်ကုန်-ပုသိမ်ကားလမ်း မိုင်တိုင်(၇၁/၇)နှင့် (၇၂/ဝ) ကြား မကျီးကုန်းကျေးရွာအနီးတွင် ပုသိမ်မှ ရန်ကုန်သို့ ယာဉ်မောင်း ဇော်ဝင်းမောင် (၄၇)နှစ် (၈၈)ငြိမ်း/ပွင့် ရုံးအဖွဲ့မှူး မောင်းနှင်ပြီး မသင်းသင်းအေး(ခ)မမီးမီး၊ မခက်ခက်၊ ကိုစိုးလှိုင်ဦးတို့ လိုက်ပါလာသောYGN 4K/--- အဖြူရောင် မော်တော်ယာဉ်သည် အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ လမ်း၏ယာဘက်ခြမ်းသို့ ထိုးကျ တိမ်းမှောက်ကာ ကိုဇော်ဝင်းမောင်၊ မခက်ခက်နှင့် ကိုစိုးလှိုင်ဦးတို့တွင် ဒဏ်ရာ မရရှိဘဲ မသင်းသင်းအေး(ခ)မမီးမီးမှာ ဝဲဘက်လက်မောင်းကျိုး၊ ယာလက်ဖျံ ပေါက်ပြဲ၊ နား၊ နှာခေါင်းသွေးထွက် ဒဏ်ရာများ ရရှိသွားသဖြင့် ကျောင်းကုန်း ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ဆေးကုသမှုခံယူနေစဉ် သေဆုံးသွားသဖြင့် ကျောင်းကုန်း မြို့မရဲစခန်းက အမှုဖွင့်အရေးယူ ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း မြို့မရဲစခန်းမှ သိရသည်။
35. ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၌ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေ၊ အမျိုးသားတစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိ	-TimeAyeYar
ဖွင့်ရန်။ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၌ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်မှုကြောင့်
အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေ၊ အမျိုးသားတစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိ
နေပြည်တော် သြဂုတ် ၁၃
မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၅၅ လမ်း အနောက်ဘက်ခြမ်း ရွာလယ်လမ်းနှင့် နှင်းဆီလမ်းကြား တွင် ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီခွဲခန့်က သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး အမျိုးသားတစ်ဦးမှာ ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မြရည်နန္ဒာမြို့သစ် လမ်းသွယ် ၁ ရပ်ကွက် (၅၅ x ၅၆) လမ်းကြား၌ \_'\_'ကျော်ပုလင်း\_'\_' ကချင်ရိုးရာခေါင်ရည် ဆိုင် ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေသူ ဦးလီဆွမ် (ခ) ဇော်လင်း (၄ဝ)နှစ်နှင့် ၎င်း၏ဇနီး မဟော်လောက်ဖိန်(၄ဝ)နှစ်တို့ သည် မနော်ဟရီလမ်းအတိုင်း ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်လာစဉ် ၅၅ လမ်း အနောက်ဘက်ခြမ်း ရွာလယ်လမ်းနှင့် နှင်းဆီလမ်းကြား အရောက်၌ အမျိုးသားတစ်ဦးက ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ဝင်တိုက်ပြီး မဟော်လောက်ဖိန် လက်ထဲမှ လက်ကိုင်အိတ်ကို လုယူစဉ် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးလီဆွမ်က ဆိုင်ကယ် ရပ်၍ ပြန်လည်လုယူသဖြင့် ပိုက်ဆံ အိတ်လုယူသူက ပစ္စတိုသေနတ်ဖြင့် သုံးချက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး ကျည်ခွံမှာ ကန့်လန့်ခံနေသောကြောင့် သေနတ်ဆက်လက်ပစ်ခတ်၍ မရ သဖြင့် ဆက်လက်ပစ်ခတ်နိုင်မှု မရှိခဲ့ ကြောင်း။
ထိုသို့ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် မဟော် လောက်ဖိန်တွင် နဖူးကျည်ဖောက်ဝင် ဒဏ်ရာတစ်ချက်ရရှိ၍ နေရာတွင် သေဆုံးခဲ့ပြီး ဦးလီဆွမ်(ခ)ဇော်လင်း တွင် ဝဲရင်ဘတ်မှ ကျည်ဖောက်ဝင်ပြီး ယာချိုင်းအောက် ကျည်ဖောက်ထွက် ဒဏ်ရာတစ်ချက်ရရှိခဲ့ပြီး စိုးရိမ်ရ သဖြင့် ဆေးရုံသို့ တင်ပို့ခဲ့ရကြောင်း။
သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်သူမှာ ထွက် ပြေးသွားသဖြင့် အနီးရှိ နယ်ထိန်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူများက ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ၅၃ လမ်းနှင့် မနော်ဟရီလမ်းထောင့် တွင် ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) ကျောက်တလုံးကြီးမြို့ ကောင်ဝိန်း ရပ်ကွက်နေ ဦးဝေဖြိုး၏သား ခွန်ကောလား(ခ) မောင်မျိုးအား ဆိုင်ကယ်တစ်စီး၊ ပွိုင့် ၃၂ ပစ္စတို တစ်လက်၊ ယင်းကျည် ၂၂ တောင့်၊ ကျည်အိမ် နှစ်ခု၊ ကျည်ခွံ တစ်ခုတို့နှင့် အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း။
ဖမ်းဆီးရမိသူအား ဥပဒေလုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့်အညီ အမှုဖွင့်လှစ်၍ ဆက်လက်စစ်ဆေး လျက်ရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းရရှိ သည်။
34. ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ ပရိသတ်အားပေးမှု ရရှိအောင် ကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် နန်းဆုဦး	-TimeAyeYar
ဖွင့်ရန်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ ပရိသတ်အားပေးမှု ရရှိအောင် ကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် နန်းဆုဦး
ဥပါဒါန်ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွင် ဇာတ်ရုပ်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျအောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့် ပရိသတ်အားပေးမှု ရရှိထားသော သရုပ်ဆောင်နန်းဆုဦး အနေဖြင့် ရုပ်ရှင်၊ဇာတ်လမ်းတွဲများဖြင့် ပရိသတ်များ၏ အားပေးမှုကို ရရှိအောင် ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ \_'\_'ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ရတာ ကွဲပြားပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားက အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ ပရိသတ်ကို ချပြရတာဖြစ်လို့ ဇာတ်လမ်းတွဲထက် စာရင် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိမှု နည်းပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲကျတော့ ပြသချိန်လည်း ကြာတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို မျှပြီးရိုက်ရင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေဆီကအားပေးမှုကို အခိုင်အမာ ရရှိအောင် ကြိုးစားသွားမှာပါ\_'\_' ဟု နန်းဆုဦးက ပြောသည်။
နန်းဆုဦးအနေဖြင့် သီချင်းသီဆိုခြင်းကို အနုပညာလှုပ်ရှားမှု အနေဖြင့် လုပ်မည်မဟုတ်တော့ဘဲ ဝါသနာအရ သီဆိုမည်ဖြစ်ပြီး သူမပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ ဆက်တိုက်ရုံတင်ရန် ရှိကြောင်း သိရသည်။
\_'\_'ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို သြဂုတ် ၁၆ ရက်ကစတင်ပြီး နောက်လတွေမှာ ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ ဆက်တိုက်ရုံတင်ဖို့ ရှိနေပါတယ်။ နန်းဆုအနေနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာ ဇာတ်ကောင်စရိုက် မျိုးစုံကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ထားတာကြောင့် ပရိသတ်တွေ အကြိုက်တွေ့မယ်လို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်\_'\_'ဟု နန်းဆုဦးကပြောသည်။
လက်ရှိ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု အနေဖြင့် မကြာခင်ရိုက်ကူးမည့် သစ္စာချည်တိုင် ဇာတ်လမ်းတွဲတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရန် ရှိနေပြီး နောက်ပိုင်းတွင်လည်း ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ရခြင်းကို စိတ်ဝင်စားခြင်းကြောင့် ကမ်းလှမ်းမှုများရှိပါက ရိုက်ကူးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
33. ကန်စွန်းပဲငါးပိချဉ်စပ်	-TimeAyeYar
ကန်စွန်းပဲငါးပိချဉ်စပ် ချက်မယ်ဆိုရင် ကန်စွန်းရွက်ကို အရွက်ခြွေပြီး ရေသေချာ ဆေးပြီးစစ်ထားပါ။ ကြက်သွန်ဖြူကို ဓားပြားရိုက်ပြီး ခရမ်းချဉ်သီးကို ပါးပါးလှီးထားပါ။ ပဲပြားကို အတုံးလေးတွေ တုံးထားပါ။
စချက်မယ်ဆိုရင် အိုးတစ်လုံးထဲ ဆီအနည်းငယ်ထည့်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူ၊ နနွင်းမှုန့်နဲ့ ငရုတ်ပုထောင်းကို ဆီသတ်ပါ။ ဆီသတ်နံ့မွှေးလာရင် ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ပဲပြားထည့်ပါ။ ပဲပြားအပေါ်ယံ တင်းလာရင် ပဲငါးပိထည့်ပြီး ခဏထားပါ။ ပြီးရင်ကန်စွန်းရွက် ထည့်ပါ။ အရသာအတွက် ဆားအနည်းငယ်နဲ့ သကြားထည့်ပါ။
ကန်စွန်းရွက်နူးလာရင် ငရုတ်သီးစိမ်း နှစ်တောင့်နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနှစ်မြွှာ ထပ်ထည့်ပါ။ အိုးချခါနီးမှာ သံပရာသီးနှစ်စိတ် ညှစ်ထည့်ပြီး အရသာထူးကဲတဲ့ ကန်စွန်းပဲငါးပိ ချဉ်စပ်ကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
32. ၀က်သားလုံးအူစုံ အချိုကြော်	-TimeAyeYar
ဖွင့်ရန်။ ၀က်သားလုံးအူစုံ အချိုကြော်
ဝက်သားလုံးအူစုံ အချိုကြော်မယ်ဆိုရင် ဝက်သား၊ အူမကြီး၊ အူချို၊ အချင်းတိုင်၊ အသည်း၊ ငရုတ်ပွအစိမ်း၊ မုန်လာထုပ်၊ မုန်လာဥနီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ချင်း၊ ငရုတ်ခြောက်၊ ကြက်ဥ၊ ဆား၊ သကြား၊ ခရုဆီ၊ ကော်မှုန့်၊ ဂျုံမှုန့်နဲ့ ငရုတ်ကောင်းတို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဦးစွာ ဝက်သားကို နုပ်နုပ်စဉ်းပြီး ဆား၊ သကြား၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ဂျုံမှုန့်၊ ကြက်ဥအကာတို့နဲ့ ရောနယ်ပြီး အလုံးလုံးထားပါ။ ပြီးရင် ခဏနှပ်ထားပြီး ရေနွေးအိုးတည်ပြီး ရေဆူလာရင် ထည့်ပြုတ်ပါ။ ဒယ်အိုးထဲကို ဆီထည့်တည်ပါ။
ဆီပူလာရင် ပြုတ်ထားတဲ့ အသားလုံးကို ထည့်ကြော်ပြီး အရောင်ရဲလာရင် ဆယ်ထားပါ။ ပြီးရင် ဆီကိုခပ်ထုတ်ပြီး ငရုတ်ခြောက် ထည့်ကြော်ပါ။ အနီရောင်သန်းလာရင် ဆယ်ထားပါ။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ချင်းပါးပါးလှီးပြီး ဆီသတ်ပါ။ အသီးအရွက်တွေ ထည့်ပါ။
အရသာထည့်ပါ။ အရောင်ပြောင်းလာရင် အသားတွေထည့်မွှေပါ။ ကြက်သွန်နီကို လေးစိတ်စိတ်ပြီး အလွှာလေးတွေ ခွာထည့်ပါ။ ခရုဆီထည့်ပါ။ ကြက်ပြုတ်ရည် ဒါမှမဟုတ် ရေနွေးအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ အိုးဆူလာရင် ကော်မှုန့်ရည်ထည့်ပါ။ တရုတ်နံနံထည့်၊ ငရုတ်ကောင်းဖြူးပြီး အရသာရှိစွာ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
31. ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသူ မမီးမီး ကားအက်ဆီးဒင့်ဖြင့်ကွယ်လွန်	-TimeAyeYar
#Accident	(2d ago)
၈၈ မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းက မမီးမီးဟာ သြဂုတ် ၁၃ ရက် ဒီကနေ့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်မှာ ကားမတော်တဆဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။
သစ်ဆိမ့်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊TS ဆီဆိုင်အနီးတွင် လမ်းချော်ပြီးလမ်းဘေးသစ်ပင်အားဝင်တိုက်ပြီး မမီးမီးကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
မနီလာသိန်း၊ မမီးမီး၊ ကိုဇော်ဝမ်းမောင်၊ မခက်ခက် တို့ လိုက်ပါခဲ့ပြီး ကျန်သူတွေအသက်အန္တရာယ်မရှိဘူးဟုသိရပါတယ်။
၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းက မမီးမီး ကို တွေ့ရစဉ်/ Photo: Mee Mee - facebook
၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းက မမီးမီး ဟာ ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်မှာ ယာဉ်မတော်တဆမှုနဲ့ ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။
ကားမှောက်တဲ့အခြေအနေကို ဦးဂျင်မီ က အခုလို ပြောပါတယ်။
၅ နာရီ ၂၀ မှာ ဆုံးသွားပြီတဲ့၊ အဓိကကတော့ သူက ကားမှောက်တဲ့အခါကျတော့ ကားလဲတဲ့ ဘက်ခြမ်းကို သူကရောက်သွားတယ်။ သူကအပြင်ကိုထွက်သွားပြီး ကားကသူ့ကို ပိသွားတယ်။ သူ့ကိုပြန်ပြီး ဆွဲထုတ်ရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်
အဲဒီယာဉ်ပေါ်မှာ ဦးဂျင်မီ၊ မနီလာသိန်း၊ ဦးဇော်ဝင်းမောင် နဲ့ မခက် တို့လည်း လိုက်ပါခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပုသိမ်မြို့နယ်က ကဗျာဆရာ မောင်အောင်ပွင့် ဇနီးရဲ့ နာရေးက အပြန် ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်မှာ ယာဉ်မတော်တဆမှု ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ မမီးမီး ရုပ်အလောင်းကို ရန်ကုန်ကို ပြန်သယ်လာဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။